आदेश सञ्झ्यालहरूमा मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् युनेरी/बाइनरी सञ्चालनकर्ताहरू
युनरि र बाइनरि सञ्चालकहरू
जोड घुसाउनुहोस् एउटा placeholder सँग. तपाईँले + <?>आदेशहरू सञ्झ्याल पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
घटाउ घुसाउनुहोस् एउटा placeholder सँग. तपाईँले -<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
जोड/घटाउ घुसाउनुहोस् एउटा placeholder सँग. तपाईँले +-<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
एउटा प्लेसहोल्डर सँग घटाउ/जोड घुसाउदछ । तपाईँले -+<?> पनि आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
जोड घुसाउनुहोस् दुई placeholders सँग. तपाईँले <?>+<?> आदेश सञ्झ्यालमा टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग थोप्लो सञ्चालनकर्ता घुसाउनुहोस् तपाईँले <?>cdot<?> आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
'x' गुणन घुसाउनुहोस्दुई placeholders सँग. तपाईँले <?>times<?> आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
दुई प्लेसहोल्डरहरूसँग एस्टरिस्क गुणन चिन्ह घुसाउनुहोस् तपाईँले <?>*<?>आदेश सञ्झ्यालाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग घटाउने चिन्ह घुसाउनुहोस् तपाईँले <?>-<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग खण्ड घुसाउनुहोस् तपाईँले <?>over<?> आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग भाग चिन्ह घुसाउनुहोस् तपाईँले <?>div<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
स्ल्यास '/' दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग घुसाउनुहोस् तपाईँले <?>/<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
Boolean NOT एक प्लेसहोल्डर सँग घुसाउनुहोस् तपाईँलेneg<?> आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
Boolean AND दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग घुसाउनुहोस्तपाईँले<?>and<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
Boolean OR दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग घुसाउनुहोस्. तपाईँले <?>or<?>आदेश सञ्झ्यालमा घुसाउन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
श्रृङ्खलाबद्व चिन्ह दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग घुसाउनुहोस् तपाईँलेcircआदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ।
<?>oplus<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गरेर, तपाईँले circled plus सन्चलालनकर्तातपाईँको कागजातमा घुसाउनुभयो ।
<?>ominus<?>टाइप गर्नुहोस् आदेश सञ्झ्यालवृत्त घटाउ सञ्चालनकर्ता घुसाउन
<?>odot<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्नुहोस् सूत्रमा वृत्त थोप्लो सञ्चालनकर्ता घुसाउन
<?>odivide<?>आदेश सञ्झ्यालमा टाइप गर्नुहोस् सूत्रमा वृत्त भाग सञ्चालनकर्ता घुसाउन
टाइप गर्नुहोस्aवाइडस्ल्यास bआदेशहरू सञ्झ्याल स्ल्यासद्वारा दुई क्यारेक्टर उत्पादन गर्न (तल्लो बायाँ देखि माथिल्लो दायाँ सम्म) तिनीहरूको बीच. क्यारेक्टरहरू सेट हुन्छ जस्तै जुन सबै चीज बायाँको स्ल्यास माथि छ, र सबै चीज दायाँ तल छ. यो आदेश सामाग्री मेनुमा पनि उपलब्ध छ आदेशहरूको सञ्झ्यालमा ।
तिनीहरू बिचमाawidebslashbस्लास सँग (माथि बायाँ देखि दायाँ तल सम्म) आदेश सञ्झ्यालमा उत्पादन गर्न टाइप गर्नुहोस् । क्यारेक्टरहरू स्लासको बायाँको हरेक कुरा तल हुने, र दायाँको हरेक कुरा माथि हुने गरि सेट गर्दछ । यो आदेश आदेश सञ्झ्यालको प्रसंग मेनुमा पनि उपलब्ध हुन्छ ।
टाइप sub वा सप आदेश सञ्झ्यालमा अनुक्रमणिकाहरू र शक्त्तिहरू क्यारेक्टरहरूमा तपाईँको सूत्रमा; उदाहरणका लागि, उप २.
जब सूचना आदेश सञ्झ्यालमा म्यानुअली प्रविष्ट गर्दा, कृपया सञ्चालनकर्ताहरूको सङ्ख्या टिप्पणी गर्नुहोस् जुन तत्वहरू बीचको स्थानका लागि आवश्यक छ सहि बनावटका लागि. यो विशेष रूपमा ठीक छ यदि तपाईँले तपाईँको सञ्चालनकर्ताहरूको प्लेसहोल्डरहरूमा मानहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, भाग निर्माण गर्न भाग ४ भाग ३ वा डिव b
Title is: युनेरी/बाइनरी सञ्चालनकर्ताहरू